मिटू अभियानले भारतमा तहल्का,‘सय करोड दिए के तिमी कुकुरसँग सेक्स गर्छौ ? - Gokarna News
मिटू अभियानले भारतमा तहल्का,‘सय करोड दिए के तिमी कुकुरसँग सेक्स गर्छौ ?
एजेन्सी / मिटू अभियान भारतमा भित्रिएलगत्तै अहिलेसम्म बलिउडका विभिन्न नायक, निर्देशक र निर्मातामाथि यौनहिंसाको आरोप लागिसकेको छ । निर्देशक साजिद खानमाथि नायिका सलोनी चोपडा र सिमरन सुरीले पहिले नै यौन उत्पीडनको आरोप लगाइसकेका छन् । अब फिल्म ‘लिपिस्टिक अन्डर माय बुर्का’ की नायिका अहाना कुम्राले पनि साजिद खानमाथि आरोप लगाएकी छिन् । १० वर्षदेखि बलिउडमा काम गरिरहेकी अहानाले बम्बे टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूमाथि भएको उत्पीडनबारे जानकारी दिँदै साजिदले उनलाई घर बोलाएर सेक्स सम्बन्धि प्रश्न सोधेको बताइन् ।